नायिका जोसँग सर्वसाधारणले सार्वजनिक रुपमा गरे दुव्र्यवहार | Latest news of Nepal,world news, articles, literature, Business news, Entertainment and more
५ असार, नयाँ दिल्ली । बलिउड नायिकाहरु धेरैपटक फिल्मको प्रोमोशनको लागि भिन्न–भिन्न देशहरुमा जानुपर्छ तर थप्रै पटक त्यो उनीहरुका लागि नराम्रो सपना साबित भएको छ । प्रशंसकहरुको उत्साह त तैनाथ गरिएको सेक्युरिटीलाई पनि वास्ता गर्दैन र त्यसको उल्लंघन गर्दै यस्तै हर्कत गर्छन् जसले अभिनेत्रीहरुलाई समस्यामा पार्ने गर्दछ ।
यी हुन् बलिउडका केही नायिका जो सार्वजनिक स्थलमा नराम्रो व्यवहारको शिकार भएका छन्ः
१. कोइना मित्राः
सन् २००८ को नयाँ वर्षको सुरुवात तपाईंको लागि जतिधेरै राम्रो भएपनि भारतीय मोडल र अभिनेत्री कोइना मित्राका लागि त्यो वर्षको सुरुवात राम्रो भएन । कोइना मुम्बईको सहारा स्टार होटलमा आफ्नो प्रस्तुती दिँदै थिइन् । कार्यक्रमको क्रममा उनका एक प्रशंसकहले उनलाई अंगालो हालेर उनीसँग फोटो खिच्ने मनसाय व्यक्त गरे । उक्त कुरा सुनेपछि कोइनाले तुरुन्त सेक्युरिटीलाई बोलाएर उनलाई त्यहाँबाट भागाइन् । पछि ती व्यक्ति भीआइपी लजमा आएर कोइनालाई हात मिलाउने बहानामा उनलाई थप्पड हाने । त्यति धेरै सुरक्षा हुँदाहुँदै पनि ती व्यक्तिलाई उनीहरुले रोक्न सकेनन् ।
२. बिपाशा बसुः
‘राज थ्री’ को प्रोमोशनको क्रममा फिल्मको पूरै टिम अहमदाबादको एक मलमा गएका थिए । तर मलमा आएमा मानिसहरु बिपाशालाई देखेर यतिधेरै उत्साहित भए कि त्यहाँको सबै सुरक्षा घेरा तोडेर उनीहरु बिपाशातर्फ आफ्नो हात बढाउन पुगे । भीडमा कसैको हात बिपाशाको स्कर्टमा पुग्यो र ती व्यक्तिले उनको स्कर्ट नै तान्न लागे । आफ्नो स्कर्ट बचाउने प्रयास गर्दागर्दै बिपाशाको हातमा सानो चोट पनि लागेको थियो ।
३. इशा देओलः
सन् २००५ मा फिल्म ‘दस’ को प्रोमोशनको लागि इशा पूना गइन् । त्यहाँ पुग्दा उनको प्रशंसकहरुले उनलाई घेरे । भीडको फाइदा उठाउँदै एक पुरुषले उनलाई आपत्तिजनक तरिकाले छुने प्रयास गरे जसको प्रतिबाद गर्दै उक्त पुरुषलाई एक थप्पड हानिन् । त्यसपछि ती पुरुष त्यहाँबाट तुरुन्त भागे ।
४. गोहर खानः
कार्यक्रम प्रस्तोता तथा नायिका गोहर खानलाई एक कार्यक्रममा थप्पड हाने । ‘इन्डियाज रअ स्टार’ नामक कार्यक्रममा छोटो पहिरनमा प्रस्तुत भएको भन्दै उनका प्रशंसकले रिसाएर उनीलाई थप्पड हानेका थिए ।
५. सुष्मिता सेनः
उनी पुणेस्थित एक आभूषणको पसलको उद्घाटन गर्न गएकी थिइन् । जब मानिसहरुले उक्त पसलमा सुष्मिता आउँदैछिन् भन्ने थाहा पाए तब त्यहाँ थुप्रै मानिसहरु एकत्रित भए । भीडलाई देखेर सुष्मिता आफ्नो कारतर्फ बढिन् तर चारैतर्फ मानिसहरुले उनलाई धकेल्न थाले । त्यहाँ उपस्थित सुरक्षा गार्डलाई स्थितीलाई कन्ट्रोल गर्न गाह्रो भयो ।
असार ५ गते, २०७२ - २०:२१ मा प्रकाशित